किन जप गरिन्छ ? र त्यसको फाईदा के हो ? जानुहोस् ; - Mitho Khabar
September 21, 2020 September 21, 2020 mithokhabarLeaveaComment on किन जप गरिन्छ ? र त्यसको फाईदा के हो ? जानुहोस् ;
पतञ्जली योग सूत्रका अनुसार ओम जप गरिरहँदा मन र मस्तिष्कलाई एकत्रित गर्नुपर्छ । कुनैपनि आरमदायक स्थानमा बसेर जप गर्नुपर्छ । जस्तो पद्यासन, सुखासन, सिद्धासनमा बस्न सकिन्छ । मेरुदण्ड र टाउकोलाई सिधा राख्नुपर्छ । आँखा बन्द गर्नुपर्छ र गहिरो सास लिनुपर्छ । अब सास छाड्दै ओम बोल्नुपर्छ । नाभी क्षेत्रमा ओ आवाजबाट हुने कम्पन महसुष गरौ र त्यसलाई क्रमस माथितर्फ बढेको महसुष गरौ । मन्त्र जारी राखिरहँदा त्यसको कम्पन गलाबाट माथि बढेको महसुष गरौ । जब कम्पन गलाको क्षेत्रमा पुग्छ, तब ‘म’लाई एक गहिरो ध्वनीमा परिवर्तन गरौ । कम्पन तबसम्म महसुष गरौ, जबसम्म त्यो शिरसम्म पुग्दैन । यो प्रक्रियालाई तपाईंले दुईपटक भन्दा बढी दोहोर्‍याउन सक्नुहुनेछ । अन्तिम मन्त्र जपपछि पनि बसिरहनुहोस् र पुरा शरीरमा ओम ध्वनिको कम्पन महसुष गर्नुहोस्
June 16, 2021 Nirmal Gautam